Cannelloni gratin ne tofu uye howa | Bezzia
Tofu uye howa gratin cannelloni
Maria vazquez | 04/05/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 29/04/2021 20:17 | Pasita
Nhasi paBezzia tinoshandura chinyakare kannelloni recipe ku kudya kwevegan. Mhedzisiro yacho iyi tofu uye howa gratin cannelloni iyo mifananidzo isingaite ruramisiro. Crispy cannelloni kunze nekuzadza kunonaka kwazvo.
Hanyanisi, bhero mhiripiri, karoti, howa uye tofu, izvo ndizvo zvinosanganisa zvekuzadza. Kuzadza kwaunogona zvakare gadzirira nemamwe mapuroteni emuriwo kufanana tempeh, zvakagadzirwa nesoya kana akaomeswa mapizi kupa mienzaniso mishoma, kuitira kuti isakubate iwe.
Uye kugadzira dhishi rakasiyana zuva rega rega iwe unogona zvakare kutamba nemuto. Gratin ivo nekidiki vegan chizi ndizvo zvese zvaunoda kuti ushandise dhishi hombe, asi kana iwe ukawedzerawo muto wakagadzirwa nemukaka wekokonati seizvi kana vegan béchamel ... mhedzisiro yacho ichava gumi. Unoshinga kuzvigadzirira here?
1 Zvisungo zve 12-14 cannelloni
Zvisungo zve 12-14 cannelloni
2 tablespoons emafuta emuorivhi
1/2 bhero bhero mhiripiri, akachekwa
1/2 tsvuku bhero mhiripiri, akachekwa
10 howa, hwakatemwa
200 g. tofu, akachekwa
4 tablespoons yetamato yakapwanyika
1 teaspoon nyanya nyanya
1/2 teaspoon yepaprika (inotapira uye / kana inonaka)
Mahwendefa gumi nemaviri e cannelloni
3 magirazi emukaka wekokonati
Chidimbu che nutmeg
Munyu uye pepper kuravira
80 g. grated vegan cheese inonyunguduka zvakanaka
Mune pani yekutsvaira nemepuni mbiri yemafuta sautee anyezi, mhiripiri uye karoti kwemaminitsi mashanu.
Ipapo wedzera howa uye tofu uye bika maminetsi mashoma kusvikira howa dzatora ruvara.
Wedzerai tomato, sanganisa uye gadzira imwezve maminetsi mashoma kuti irasike chikamu chemvura yayo.
Kupedza kugadzirira kuzadza, munyu uye mhiripiri kuravira, wedzera paprika uye sanganisa.
Iye zvino bika ma cannelloni mahwendefa muguchu rine mvura ine munyu yakawanda zvichitevera rairo dzemugadziri.
Kamwe yakabikwa uye yakadururwa, isa chipunu chekuzadza pane imwe neimwe yadzo, putsa up uye enda unoisa cannelloni mune imwechete kana yakawanda ndiro yeovheni-yakachengeteka
Kana wapedza, gadzira muto kudziyisa mukaka wekokonati pamwe neinutmeg, munyu, mhiripiri uye hafu yetizi mupani, kusvikira yabatanidzwa.
Dururira muhafu yemuto pamusoro pekannelloni, paradzira chizi yasara uye udururire muto wakasara pamusoro payo. Iyo muto haifanirwe kuvhara iyo cannelloni, asi inofanirwa kusvika kanenge 2/3 yekureba kwavo.
Tora kune preheated hovhoni uye gratin kwemaminitsi gumi nemashanu kana kusvika ndarama.
Shumira iyo inopisa tofu uye mushroom cannelloni gratin.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Pasita » Tofu uye howa gratin cannelloni
Nzira shanu dzekuronga rako rekuunganidza bhuku